Manchester United Oo Rajada Horyaalka Dib U Nooleysay & Jose Mourinho Oo Markiisa Ugu Horeeyay Garaacay Chelsea Xili Ciyaarta Uu Diiq Ka Ahaa Harera | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Manchester United Oo Rajada Horyaalka Dib U Nooleysay & Jose Mourinho Oo Markiisa Ugu Horeeyay Garaacay Chelsea Xili Ciyaarta Uu Diiq Ka Ahaa Harera
Manchester United Oo Rajada Horyaalka Dib U Nooleysay & Jose Mourinho Oo Markiisa Ugu Horeeyay Garaacay Chelsea Xili Ciyaarta Uu Diiq Ka Ahaa Harera	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 16-April-2017
Jose Mourinho ayaa markiisa ugu horeeyay guul ka gaaray kooxda Chelsea tan iyo markii uu isaga tagay shaqada macalin nimo ee kooxda Chelsea kaasoo kulankan u ahaa kulankiisa seddexaad uu wajaho kooxda.
United ayaa labo gool ay uga mahad celinayso Rashford iyo Harera kaga adkaatay dhigeeda Blues taasoo ka dhigantahay farqiga dhibacaha kooxda Chelsea in uu soo nusqaamayyo maadama seddex dhibcood haatan ku lumisay kulankan.
Ciyaarta ayaa ahayd mid xiiso leh maadaama Jose Mourinho uu wajahayey kooxdiisa hore ee Chelsea oo haatan hogaanka premier leageu hayaan.
Chelsea ayaa weysay golhayyaheed koowaad maadama uu dhaawac qabo Courtios waxaana shabaqa Chelsea u hayye goolhayyaha nasiibka xun ee Bakovic sidoo kale Chelsea ayaa caqabad kale heshay ka dib markii uu marcos Alonso uu ciyaarta asna dhaawac kaga maqnaa waxaana booskiisa buxinayey kulankani Zouma.
Jose Mourinho ayaa qamaar cajiib ah lasoo galay garoonka maadamaa uu safkiisa koowaad ka reebay joog dheeraha reer Sweden ee Ibrahimovic kaasoo ka door biday xidiga reer England ee Rashford.
Daqiiqadii 7-aad ee ciyaarta Marcos Rashford ayaa hogaanka kooxda United u dhiibay ka dib markii uu si tartiib ah uu u dhaafay daafacyada kooxda Chelsea si sahlanna ku daba mariyay gool hayye Bakovic.
Chelsea ayaa isku dayo kala duwan sameysay oo ay dooneysay in ay iska soo guda goolka deenta ahaa ee lagu lahaa balse nasiib dar qeybta koowaad ayaa waxaa lagu kal nastay 1-0 oo lagu leeyahay.
Sidoo kale waayeelka kooxda United qadka dhaxe u maamula ee u dhashay England Carrick ayaa kulankiisa 450-aad kasoo muuqday garoomada asigoo xeran fanaanada cas ee United ay xeranatahy.
Chelsea xidiga qadka dhaxe u ciyaara ee Kante ayaa ahaa mid aan garoonka waxba ka ahayn maadaa uu dhaxda u galay xidigaha reer Belgium Felliani iyo kan reer Spain ee Harrera.
Daqiiqadii 49-aad ee ciyaarta afar daqiiqo ka dib markii dib loo anba qaaday ciyaarta waxaa gool kale kooxda United u dhaliyay xidiga reer Spain ee Harera kaasoo caawiyey goolkii koowaad ee Rashford uu dhaliyay waxeyna uga dhiganathay in uu markiisa ugu horeesay sidaan sameeyay tan iyo October 2015-kii kulan ay Evertoon ay la ciyaareyn.
Sidoo Cesc iyo Kante ayaa ku wiiqmeen qaabka ay u joojin lahaayeen tima weynaha kooxda United qadka u maareenayey ee Falliani waxeyna noqotay sidan in ay u joojiyan xidigan.
Jose ayaasan ku farxin goolasha Ay dhaliyeen xidigihiisa maadaama kooxda lala ciyaarayyo ay tahay kooxda hogaaminayso horyaalka ahna koox uu hore usoo hogaamiyay kaasoo si weyn ay sharfaan taageerayaasha kooxda Blues.
Rashford oo ahaa gool dhaliyihii koowaad ee ciyaarta ayaa badal looga saaray daqiiqadii 86-aad ee ciyaarta waxaana la keenay xidiga inuu careesnaa u muuqday ee Zlatan Ibrahimovic kaasoo kursiga keydka lagu soo bilaabay kulankan weyn.
xidigaha reer France ee Pogba iyo kante ayaa ahaa kuwa si weyn isku raacayey maadama shaqsi walba shaqo adag ay hortaalo qaasatan shaqo weyn ay hortaal xoog weynaha lagu magacaawo Kante.
Ugu danbeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 2-0 oo ay guusha ku raacady kooxda loo martinayey ee Red Devils waxeyna uga dhigantahay in ay sare u kac ka sameynayso horyaalka premier league.